Brezila, Goavana Vaovao Eo Amin’ny Sehatry Ny Fiadiana Tsy Mahafaty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2013 16:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, English, Türkçe, Português
Ity lahatsoratra nosoratan'i Bruno Fonseca sy Natalia Viana, avy amin'i Agência Pública, ity dia nivoaka tamin'ny voalohany tamin'ny lohateny hoe “Bomba brasileira na pele turca” (grenady breziliana hamelezana ny Tiorka) , izy ity dia ao anatin'ny fanadihadiana manokana momba ireo vondron'olona mpanery ny manampahefana sy ny orinasa mpamokatra fitaovam-piadiana ao Brezila #IndústriaBrasileiraDeArmas. Hisy lahatsoratra telo momba izany fanadihadiana izany eto amin'ny Global Voices Online.
Ny fitaovam-piadiana novokarin'ny Condor no ampiasain'ny governemanta federaly sy ny polisy manerana ny firenena. Ny fandaharan'asa federaly ohatra dia mihevitra ny hividy ireo fitaovam-piadiana ireo ho an'ny Vondronkerin'ny Polisy Mpampandry Fahalemana (UPP) ao Rio de Janeiro sy ho an'ireo vondro-tafika manokan'ny fanjakana 12 nirotsaka tao amin'ilay fandaharan'asa. Tafiditra ao anatin'izany ny poleta karazana “tasers” sy ny tsifitra dipoavatra. Noheverina hampiasaina amin'ny fotoan-dehibe tahaka ny Amboran'ny Konfederasiona na ny Mondialy 2014 izy io : izay indrindra no efa nanokanan'i Brezila tetibola mitentina 49 tapitrisa Reais hividianana Condor (17 tapitrisa €).
Tamin'ny avrily 2012 ny Vavahadin'ny Mangarahara namoaka vaovao fa ny governemanta federaly dia nividy fitaovam-piadiana tsy mahafaty mitentina 1,5 tapitrisa Reais (500 000 €) tao amin'ny Condor hidiran'ny tafika an-tsehatra ho fampanajana ny lalàna sy ny filaminana tao amin'ny fokontaniny avaratr'i Rio de Janeiro antsoina hoe complexos do Alemão e da Penha. Izany fitaovam-piadiana izany dia ahitana grenady mirefotra (GL307) miisa 1 125, miisa 500 ny grenady maro fiantraikany miaty dipoavatra (GM 102) ary miisa 500 grenady manetroka, miisa 29 500 ny andiam-bala fingotra ry 700 ny grenady mandatsa-dranomaso fanao amin'ny fihetsiketseha-panoherana tsindraindray (GL -310), dia ireo izay mitovy tamin'ny nampiasaina hamoretana ny fihetsiketsehana nitranga tany Torkia.
Tamin'ny jona 2010 ny governemanta ao Rio de Janeiro no nanafatra Condor hitandroana ny Vovonana Rio+20 : fividianana tsifitra dipoavatra 900, grenady mandatsa-dranomaso (kambatelo) 1300, grenady mirefotra 870 ary andiam-bala kalibra 12 vita fingotra 5000.